Iwo gumi nematatu mabhurawuza akanakisa eMac, nderipi rakanyanya kunaka? | Ndinobva mac
Jose Alfocea | | Mac Os X, Zvimwe Zvirongwa zveMac
Uri kutsvaga iyo bhurawuza rakanakira Mac? Parizvino pamusika tinogona kuwana nhamba yakakura yemabhurawuza anoenderana neOS X. Vazhinji vashandisi vanoshandisa Safari sezvo ichiuya ichiiswa natively uye ndiyo inopa kusangana kwakanyanya nehurongwa hwese. Kunyangwe zvakadaro, kuchine chikamu chikuru chevashandisi vanosema Safari kusvika padanho rakafanana iro vashandisi veWindows vanokanganisa Internet Explorer, saka, isu tinokupa iwe runyorwa rwe epamusoro gumi mabhurawuza eMac.
Mumusika tinogona kuwana nhamba yakakura yemabhurawuza akagadzirirwa kushanda neApple's desktop operating system, kunyangwe nhamba yavo yakati rebei, hongu kana tikachienzanisa nenhamba yemabhurawuza anoenderana neWindows. Asi kunyangwe zvakadaro muchinyorwa chino tiri kuzokuratidza mabhurawuza akanakisa eMac ayo anoshanda senzira dzemamwe mabhurawuza anozivikanwa seSafari, Firefox, Chrome, Opera ...
Urongwa urwu rweakanakisa mabhurawuza eMac uye OS X yandiri kuita ndichifunga zvandinoda uye kuyedza tsanangura zvikonzero izvo zvakanditungamira kuti ndizviise mutsamba inotevera. Isu tinovimba kuti mushure mekuverenga iyo positi iwe unozogona kusarudza yakanakisa browser ye Mac kana iyo inonyatsokodzera zvaunoda.
1 Safari, iro rakanakisa bhurawuza reMac kune vakawanda
7 Torchi Bhurawuza
10 Sleipnir Bhurawuza
12 Rockmelt, iyo yemagariro midhiya browser
Safari, iro rakanakisa bhurawuza reMac kune vakawanda
Iwe pachako, kana uri zvakare mushandisi weiyo iPhone, iPad kana iPod touch, Safari ndiyo yakanakisa browser ye Mac yaunogona kushandisa. Kubvumirana pakati pezvigadzirwa zvakabatana iyo account imwechete inotibvumidza kutarisa mabhukumaki uye kunyangwe nhoroondo yeMAC yedu kubva kune chero iPhone, iPad kana iPod Touch. Uye zvakare, kuwiriranisa kwemakiyi nemazita evashandisi kuburikidza neICloud Keychain kunoita kuti ive yakachengeteka uye yakapusa sarudzo yekuve neyedu data pamunwe wedu kwese patiri.
Matambudziko neBlue yako Mac kubatanidza?
Safari inoshanda nekukasira zvekuti iwe haufunge nezvekushandisa imwe bhurawuza iyo inofungidzira kuti ndiyo. Safari yakagadzirirwa nevakagadziri vakafanana neOS X, saka zviri nani kugadzirisa neese system uye akasiyana mawebhusaiti atinogona kuwana zvakaoma kurova. Uye zvakare, ivo zvakare vanotibvumidza isu kuti tiwedzere iyo isinganzwisisike yekuwedzera kune iyo browser saka chikonzero chekuti Chrome iri nani mupfungwa iyoyo haina musoro zvachose.
Kunyangwe kukura kunononoka kuri kusangana neFirefox, iyi browser yeMac ichiripo imwe yeakanakisa eOS X mushure meSafari, iyo inouya yakaiswa natively. Firefox yagara ichizivikanwa nekuyedza kuchengetedza kubhurawuza kwemushandisi zvakanyanya sezvinobvira nekuvharira, mukati mayo mikana, chero mhando yekuwana MAC yedu kuburikidza nayo. Imwe bhenefiti yatinopihwa neFirefox kuzvimiririra uye kuvanzika kwainotipa patinovhura, kunyanya pamapeji ewebhu akadai seAmazon, ayo anoteedzera makuki edu kuti azive zvatiri kutsvaga uye nemitengo yatakatowana kare.
Maitiro ekuvhura Terminal paMac
Imwe yezvinhu zvinoita kuti ive imwe yeakanakisa mabhurawuza eMac ndiyo mukana wekuwedzera chero mhando yekuwedzera. Muchokwadi, kune akawanda acho anongowanikwa chete kuFirefox asina kuwana mumwe wake kune mamwe mapuratifomu akadai seChrome. Kutenda kuenzanirana pakati pemidziyo ine Firefox tinokwanisa zvakare kuve nemabhukumaki edu ese uye mapassword pane zvese zvishandiso uko kwatine Firefox yakaiswa, ingave Windows, Android, Linux ...
Dhawunirodha Firefox mahara.
Kusvikira nguva pfupi yadarika, bhurawuza raigara riri dema makwai eMac malaptop.Kushandisa kwakanyanya kwese ecosystem yezvishandiso kwazvinogara zvichisanganiswa (Hangouts, Google Drive ...) yakaita iyi browser. musoro chaiwo weMacBook bhatiri redu. Izvo hazvina basa kuti ndeipi peji rawakashanyira uye kuti raive neFlash kana kwete, vateveri veMacBook yedu vaigara vakaiswa musimba izere pasina chikonzero chiri pachena, nekudaro mashandisiro ayo akaderedzwa zvakanyanya muApple laptops, kwete zvakadaro muMac yedesktop uko kunwa kuri kwechipiri sezvo tichiziva kuti hatisi kuzopera bhatiri.
Neraki, yazvino vhezheni yeChrome yeOS X yakagadzirisa dambudziko iri uye kumhanya kwevateveri veMacBook yedu kwakaramba kuri pamatanho akakwana, pamwe nekushandisa bhatiri, asi kune vazhinji vashandisi zvakanonoka uye Chrome haina kutsika zvekare malaptop avo. . Chrome, seFirefox, inotipa kuwiriranisa kwemabhukumaki pakati pezvishandiso zvakasiyana nemapassword, izvo zvinoita kuti kushandiswa kwayo kuve kwakanyatsogadzikana pasina kunyora pasi mapassword kuti uatakure. Uyezve, iyo yekushandisa uye yekuwedzera chitoro inotipa isu hombe nhamba yekuwedzera-ons Yedu bhurawuza, mawedzero-ayo anogona dzimwe nguva kuve asina pundutso sezvo vachigara chikamu chikuru chezviwanikwa zveMac edu.
Dhawunirodha Chrome mahara.
Kusvikira zvakazarurwa naWellden zvaitwa zveruzhinji uye nzira dzinoshandiswa nehurumende dzese, kwete North America chete, kuti vasore vagari vavo, vashandisi vazhinji vatendeukira kuTror browser. kusasiya chero kwekutsvaga kwako uye kufuridzirwa nemhedzisiro yekutsvaga zvichienderana nenzvimbo yako (IP).
Tor yakavakirwa paFirefox iyo inotibvumidzawo kuti tishandure iyi browser kusvika padanho repamusoro. Zvinonyanya kuitika kuti paunoshanyira mawebhusaiti ane kushambadza kwakawanda uye zvinhu zvinoteedzera zviitwa zvedu, bhurawuza racho harishande nemazvo, zvinozotimanikidza kudzikamisa zvimwe zvinhu zvekugadzirisa. Iri bhurawuza reMac rakanakira troll, ivo vashandisi vanofarira kugadzira gakava pamapeji ewebhu avanoshanyira uye avo vanowanzo garovharwa kuburikidza neIP.
Tor inowanikwa mahara kurodha pasi.
Ini pachangu, ini ndiri mumwe wevashandisi vanofunga izvozvo Opera haina kukwanisa kuenderana nenguva dzazvino uye pakupedzisira yakaguma nemari yakaderera kwazvo yemushandisi kana ichienzaniswa nemakore apfuura. Kushaikwa kwesarudzo dzekumisikidza, pamusoro pekushanda kwayo dzimwe nguva kwakashata, kwakaita kuti veruzhinji varege kuishandisa.
Opera inotibvumidzawo isu kuisa ekuwedzera ekugadzirisa edu ekufamba uye zvinodikanwa zvishoma kushanda nemazvo ivo vakaderera zvakanyanya. Sarudzo yakanaka yezvishandiso zvine simba shoma.
Opera inowanikwa mahara kurodha pasi.
Maxthon ndiyo imwe sarudzo yakanaka kana iwe uchida kuyedza imwe browser. Izvo hazvipe isu chero chinhu kubva pane zvakajairwa, iyo inotibvumidza kuyananisa data redu rekubhurawuza nemamwe majaira, zvitoro zvepassword, nzvimbo dzekuzadza ... Nyaya yekuwedzera haishande sezvainofanira sezvo ichingotibvumidza kuisa mashoma ezvitoro zveFirefox neChannel. Iko brawuza iyi yeMac inomira iri mune izvo zvinodiwa kuti zvishande, sezvo kusiyana neChrome munguva dzayo dzakaipa, Maxthon haidi zvakawanda zvinodiwa kubva kuMac kwedu.
Maxthon inowanikwa kurodha mahara kuburikidza neMac App Store.
Chromium-based browser, senge Chrome. Iyi ndiyo Bhurawuza rakanakisa reMac ratingawana rekushandisa mavhidhiyo nemumhanzi, asi inoshanda kunyanya patinotarisa pakuridza mimhanzi kuburikidza nebrowser. Izvo zvinotibvumidzawo kurodha mavhidhiyo atinotamba mubrowser tisingafanirwe kuisa chero imwe yekuwedzera sekunge inoitika muChannel. Iyo zvakare inosanganisa yakakodzera torrent maneja wevanoda kurodha. Kuve wakavakirwa paChromium, Torch inobvumira kumisikidzwa kwezvose zvinowedzerwa zviripo paWebhu Chrome Chitoro.
Iko kushandiswa kwekuwedzeredzwa, sekutaura kwandaita pamusoro, kunofanirwa kuitwa zvine mwero kana zvikasadaro tinogona kushandura bhurawuza kuita nyurusi rakaoma kufamba pane chero Mac, zvisinei nekugadziriswa kwayo. Torch notices kunyanya patinowedzera zvinopfuura zvina. Bata Bhurawuza inowanikwa kurodha mahara.
Fake ibrowser yeMac iyo inoita kushandisa michina kuve nyore. Fake inotibvumidza kudhonzera zviito zvebrowser kugadzira graphical workflows pasina kudikanwa kwehunhu hwevanhu. Yakagadzirwa workflows inogona kuchengetedzwa uye kugoverwa nevazhinji vashandisi. Fake inofemerwa neEmatorator kubva kuOS X uye iri musanganiswa wakakwana weSafari neOktomator iyo inotibvumidza kudyidzana neinternet nekukurumidza uye zvakanaka.
Fake yakakosha kune vashandisi vepamberi sezvo ichavatendera shandura mabasa kana uchizadza mafomu marefu uye mifananidzo inobatwa. Zvese zveFake's otomatiki maficha anofambiswa neyekuzvarwa Mac OS X AppleScript yekunyora chishandiso, ichibvumira otomatiki kunyora kuti iwedzerwe kune mamwe akajairwa rairo mutsara mabasa.
Iri bhurawuza, richinyatso tsanangura, haiwanikwe mahara, mutengo pa $ 29,95, asi tinogona dhawunorodha yemahara vhezheni kuona uye kuyedza mashandiro ayo.
Yandex, weRussia mavambo, ndiye bhurawuza reRussia yekutsvaga hofori Yandex, havana kunetsekana kuchinja zita sekunge Google yakaita nekudana bhurawuza ravo Chrome. Yandex inozivikanwa nekuve imwe yeanokurumidza mabhurawuza eMac iyo yatinogona kuwana mumusika, inotidzivirira kubva kumawebhusaiti ane ngozi ane malware uye inotidzivirira nekutizivisa patinobatana kune yeruzhinji network yeWi-Fi, kuitira kuti titarisire ruzivo rwatinopinda.
Nezve maitiro, Yandex inotibvumidza kugadzirisa mamiriro ekutsvagisa kuichinjanisa neyedu zvido, chimwe chinhu icho vashoma vashoma mabhurawuza anogona kupa parizvino. Kufanana nemamwe mabhurawuza mazhinji, inotipawo mukana wekufananidza bhurawuza redu uye data rekutora nemamwe madivayiri, sezvo Yandex inowanikwawo kune iOS neApple.
Yandex inowanikwa kuti utore mahara.
Sleipnir Browser mushambadzi anoti vakagadzira iyi browser mumufananidzo uye akafanana nemaitiro aungade kuti yaive browser yako yaunofarira, zvigunwe zvemapeji ehukuru hwakakodzera kuti uonekwe pasina kusiya maziso edu, tsvaga minda ine sarudzo, zviri nyore kuwana iyo yakavhurika tebhu yaunoda panguva iyoyo ...
Sleipnir yakagadzirirwa kuti igone chengetedza kufamba kuburikidza nemasaini ari paPad Pad kana Magic Mouse, tichisiya parutivi zvakajairika kumusoro nekudzika kutsikisa kutenderera peji ratiri kushanyira. Ine zvidzitiro zve keyboard kuti ikurumidze kufamba, kuti mbeva isatombove yakakosha kuti ikwanise kufamba zvakanaka. Iri bhurawuza rinotipa mukana wekuvhura anosvika zana matabhu akasiyana, ndiko kuti, kana mashandiro sezvaunovhura matabhu akaderera zvakanyanya.
"Vivaldi" ndeimwe yeazvino Mac mabhurawuza, zvisinei, ine ruzivo rwakawanda sezvo yakagadziridzwa nekambani Vivaldi Technologies, iyo yakagadzirwa neiye muvambi uye aimbova CEO we "Opera" (bhurawuza yatatoona pamusoro apa. ) Jon Stephenson von Tetzchner.
Iyo freeware browser ine "reactionary" yekubata sezvo inomuka seyinoita shanduko yakaitwa naOpera kubva kuPresto kuenda kuBlink, ndosaka chirevo chayo chazvino chiri "Bhurawuza kushamwari dzedu".
"Vivaldi" webhu bhurawuza yeMac yakagadzirirwa avo vashandisi vanopedza maawa akawanda vachitsvaga mambure, saka zvinotsanangurwa se "Iwe pachako, unobatsira uye unoshanduka", Uye chokwadi ndechekuti ndizvo. Semuenzaniso, unogona sarudza nzvimbo yematebhu pamusoro, pasi kana kune rimwe remativi, uye iwe unogona kana kusarudza iyo kero bar nzvimbo. Mukuwedzera, iwe unogona zvakare gadzirisa zviratidzo negonzo, chitarisiko, keyboard pfupi uye zvimwe zvakawanda
Pakati pemabasa ayo akatanhamara uye maficha tinogona kuratidza kuti inopa imwe yeakasimba kwazvo nhoroondo yekufamba iine nhamba dzekushandisa dzinoratidzwa nenzira inoonekwa, kugona kutarisa mawebhusaiti uye kuwana zvinongedzo zviri nyore uye zvimwe zvakawanda. Iyo zvakare ine inobatsira manotsi pani uko kwaunogona kunama iwo mavara anokufarira zvakanyanya, wedzera chinongedzo uye kunyange mifananidzo, ine simba bookmark maneja izvo zvicharerutsa mashandisiro ayo zvisinei nehuwandu, basa Kuunganidzwa kwematebhu", nezvimwe.
Unogona kudhawunirodha Vivaldi yeMac zvachose mahara pane yayo yepamutemo webhusaiti.
Rockmelt, iyo yemagariro midhiya browser
"RockMelt" ibrowser yeMac yakanyatsogadzirirwa avo vashandisi vanotsvaga zvakanyanya kuburikidza nemagariro avo, kunyanya paFacebook. Zvichienderana neGoogle's Chrome browser, RockMelt ine mukana we pasocial media kusangana uye akasarudzika maitirwo kuitira kuti uve neshamwari dzako "vhara" maawa makumi maviri nemana pazuva. Inosanganisirawo a chat bar, mukana wekuwedzera masocial network, kugadzirisa mamiriro ako zvakananga kubva kunzvimbo dzayo dzekudzora uye nezvimwe zvakawanda.
Sezvatakataura, iri bhurawuza rakavakirwa paChannel saka inosanganisira simba rese, mashandiro uye mashandiro ayo, nemukana wekubatana kwako pasocial network.
Unogona kurodha RockMelt yeMac mahara pano.
"Boka" ibhurawuza rakagadzirirwa mapuratifomu akawanda, kusanganisira Apple Mac. Seinjini yemagetsi inoshandisa Gecko, inova yakafanana neiya inoshandiswa muMozilla Firefox, uye mukana wayo kana chinonyanya kukosha ndeichi kusangana kwakasimba nemasevhisi akakosha senge Facebook, Twitter, Flickr kana YouTube. Nenzira iyi, Vashandisi veboka vanogona kuzvirumbidza nekukurumidza uye kwakananga kuwana kune chero eaya masevhisi.
Chimwe chezvinhu zvaro zvakasarudzika ndeye boka remberi, zvakanyanya zvekuti inogona kutsanangurwa sembiru mbiru yewebhusaiti iyi. Iyo inzvimbo kubva kune iyo vashandisi vane yakananga kuwana kune yavo RSS feeds uye Favorites.
Asi hazvisi zvese nekuti Boka zvakare rine:
Iko kugona kunyora nyowani mablog mablog uye mawebhusaiti muWordPress, Livejournal kana Blogger kunyangwe iwe usina kubatana neinternet panguva iyoyo.
Anesimba clipboards pa-line paunogona kusevha zvinyorwa, zvinongedzo, mifananidzo inoenderana newe kuti ubvunze kana kushandisa gare gare.
Sarudzo yesimba share photos paFacebook kana Flickr pasina kusiya browser.
Unogona kudhawunirodha Flock web browser zvemahara pano.
Pano iwe une yakanaka dzakateedzana dzimwe nzira paunenge uchitsvaga pawebhu seyakajairwa iyo Apple inosanganisira mune ayo Mac makomputa, kubva kune vamwe seanokudzwa uye anozivikanwa seFirefox, Chrome kana Opera, kune vamwe vasingazivikanwe asi neine minimalist dhizaini, inonzwisisika uye izere nemabasa. , simba uye kuita, saVivaldi kana Tor. Zvino iwe sarudza, ndeupi wavo waunosarudza?
Makore mashoma apfuura takave nemhando dzakasiyana siyana, asi mabhurawuza mazhinji akamira kuvandudza se Camino, vamwe vakaita Rockmelt yakatengwa neYahoo, Boka Iri kuchinja zvinangwa zvayo uye isu hatizive uye kana ichizodzoka nebrowser yayo yeMac. Buda Bhurawuza yakamira zvachose kuvapo uye haina parizvino webhusaiti.
Unogona here kuwedzera zvimwezve kune urwu runyorwa? Chii chiri chako yakanakisa browser ye Mac?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Bhurawuza reMac
Ini pachangu ndakaedza mabhurawuza akati wandei paMacBook Air yangu, iyo yakanyanya kundibata yaive Crome nekuda kweshanduro yayo, asi munguva pfupi ndaifanira kudzokera kuSafari, nekuda kwezviito zvisina Crome yakawanda.
Pindura kuna salomon
Miguel Angel Juncos akadaro
Zvizere unobvumirana. Chrome iri pamusoro munzira dzakawanda, asi Safari yakavakirwa-mukati makawanda-ekubata maoko anokosha. Ini ndinoda kumhanyisa minwe miviri pane iyo trackpad yekudzokera kumashure, semuenzaniso.
Pindura Miguel Ángel Juncos
wakafa wako akadaro
Kubva nhasi, chimiro chiripo uye chrome yapfuura safari pane mac. Kamba yadarika tsuro.
Pindura kune wako akafa
Ini ndinoshandisa Firefox neThunderbird kune email paMac uye zvakare paPC. Nzvimbo chete yandinoshandisa Safari iri neiyo iPad. Zvikonzero? Kuvimba, chengetedzo, kugadzirisa. Ini handivimbe nechinhu, asi hapana nezve Chrome kana Big Hama Google uye nechido chayo chekutora yakawanda uye yakawanda data iwe usinga zive.
Chafic BG (@chaficbaw) akadaro
Pamwe munhu anogona kumhanya nekukurumidza kupfuura mumwe, asi iko kushandiswa kwe "mabhandiro" neiyo trackpad ndeyechipiri kune hapana, iyo yakanakisa kubhurawuza chiitiko. kwaziso ndinotenda nekatsamba.
Pindura Chafic BG (@chaficbaw)
unogona kuisa Russian Sputnik browser paMac?
Mhoroi, ndine mubvunzo. Chrome haichachagadzirise Mac yangu saka pane akawanda mapeji andisingakwanise kupinda. Yangu inoshanda sisitimu inotevera: OS X 10.8.5. Hazvindibvumidze kuti ndivandudze, kana kuisa Firefox ... Uye handizive kuti nei Safari isingashande kwandiri kana! 🙁
Izvo chaizvo zvakafanana zvinoitika kwandiri uye ini handizive kuzvigadzirisa, wakwanisa here kuita chimwe chinhu? kwaziso
Pindura kuna ane
Unoziva here kana paine Mac inoenderana meta yekutsvaga injini?
Firefox Quantum (vhezheni 57) zvachose!
Anne Swan akadaro
Ini handichagona kuvhura akawanda mapeji paMac yangu kupfuura nakare uye ini ndine safari, chii chandingaite?
Pindura kuna Anne Swan
Ini ndanga ndisingazive mashoma eiyo rondedzero, ini ndichafanirwa kuvaedza sezvo ini ndisingade Safari zvakanyanya sepakutanga ...
Kana iwe uchida rumwe ruzivo pane imwe webhusaiti ine inobatsira kwazvo zvinyorwa zvichitaura nezve izvi. http://www.descargarotrosnavegadores.com
Ndinovimba mumwe munhu achave wekubatsira, ndatenda uye nezvakanakisa!
Zvakanakira nekuipira kweApple Watch neLTE
Maitiro ekuisa Sierra kubva pakutanga